ဘဝမှတ်တိုင်: samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...........?
samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...........?
samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...........? လွတ်ပစ်လိုက်တော့ မှာလား ......? ဆိုင် ပို့် လိုက်တော့ မလား ကြိုးစားကြည့် ချင်သေးလား တော်ရုံတန်ရုံ ပျက် တာလောက်နဲ့ကတော့ဒီနည်းလေးနဲ့ကြိုးစားကြည့် လိုက်ပါ။အဆင်ပြေသွားပါလိမ့် မယ်။ကဲအောက်မှာနည်း
ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဆိုင်မှာဆိုရင်တော့( 50000 အထက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ် ) မိတ်ဆွေတို့ ကြိုးစားကြည့် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာလေ့ လာပေးပါ။လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ ရိုးရှင်းပါ
တယ်သေသေချာချာလေးစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ လိုက်လုပ်ကြည့် ပေးပါ။အခုဖော်ပြပေးတာက software dead ပါ။ hardware dead မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ hardware dead ဆိုရင်တော့ မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
အဆင့် ( ၁ )
Rebootလုပ်ပြီး recoveryထဲကို ( Middle key + Power on ) နဲ့ ဝင်ပါ။
wipe cache ကိုရွေးပါ
wipe data/factory reset လုပ်ပါ။
download modeထဲကိုဝင်ပါ ပြီးရင် firmware ကို Odinကိုအသုံးပြုပြီး flash လုပ်ပါ။
အဆင့်( ၂ )
Download mode ထဲကိုဝင်မရသူများအတွက် ကတော့ အောက်ကအတိုင်းဝင်ပေးပါ။
Home + Volume Down + Volume Up + Power download mode ထဲကိုဝင်ပါ။
( သို့ မဟုတ် )
battery ဖြုတ်ပြီး Volume down + Middle key + Power on. ကိုနိုပ်ထားပါ။ flash ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
အဆင့် ( ၃ )
Java ကိုpc မှာ install လုပ်ပါ။ Download Java site ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ။ Direct link , solidfiles , zippyshare
one-click Unbrick tool ကိုဒီမှာယူပါ install လုပ်ပါ ။ Direct link , zippyshare , solidfiles
window users အတွက် .rar/.zip extractor software ကို ဒီမှာယူပါ install လုပ်ပါ။ DOWNLOAD.
အဆင့် ( ၄ )
၁ ။ One-Click.jar file, ကို Right-click ထောက်ပြီးတော့“7-zip” ထဲကိုထည့် ပြီး “Extract to OneClick”.ထဲသို့ ထည့် ပေးလိုက်ပါ။
၂ ။ ယခုဆိုရင် ‘OneClick’ folder ကိုရပါပြီ။
၃။ ‘OneClick.jar’ file ကို copy ယူပြီး ‘OneClick > heimdalloneclick > resources > HeimdallPackage’ folderထဲ ကို paste လုပ်ပေးပါ။
၄။ ‘oneclickloader.exe’ file ကို Right-click ထောက်ပြီး ‘Run as Administrator’. အဖြစ်နဲ့run ပါ။
၅။ Heimdall ကို Installion လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။
၆။ install လုပ် ပြီးသွားရင်တော့One-Click UnBrick ရဲ့ ပုံလေးကိုတွေ့ မြင်ရမှာပါ။
၇။ . ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး “unsoft brick” လေးကိုနိုပ်ပြီး recovery လုပ်နိုင်ပါပြီ
၈ ။ samsung usb driver ကိုဒီမှာယူပါ။ DOWNLOAD -
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/27/2013 09:28:00 am